महिलाविरुद्ध अनलाइन दुर्व्यवहार:: Naya Nepal
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले अनलाइनमा हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध कदम चाल्न ढिलो भइसकेको छ
भौतिक आक्रमणको धम्की । नांगो फोटो । जातीय गाली । शरीरलाई गिज्याउने । यी दुर्व्यवहार दैनिक जीवनमा सह्य हुँदैन । तर, भर्खरैको एक विश्वव्यापी सर्वेक्षणमा ५८ प्रतिशत महिलाले सामाजिक सञ्जालमा यस्ता व्यवहार नियमितजस्तो सामना गरेको बताएका छन् । महिलाहरूले दुर्व्यवहारलाई अनलाइन अनुभवको सामान्य हिस्साका रूपमा स्विकार्न थालेका छन् । पाँचमध्ये एकजनाले दुर्व्यवहारपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग उल्लेख्य घटाएको वा प्रयोग गर्नै छाडिदिएको पाइएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका दशमध्ये एकले थप दुर्व्यवहारबाट बच्न आफ्नो शैली बदलेका छन् । केही त डिप्रेसनतर्फ धकेलिएको देखिन्छ । दुर्व्यवहार सामना गर्ने कुरामा महिला एक्लो हुन्छन् । तीनमध्ये एकजनाले दुर्व्यवहारकर्ताविरुद्ध रिपोर्ट गर्दा पनि समस्या कम नभएको पाए । यो विश्वभरको यथार्थ हो । अनलाइन दुर्व्यवहारबारे प्लान इन्टरनेसनलले गरेको हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो सर्वेक्षणमा २२ देशका १४ हजार युवतीलाई यस विषयमा विभिन्न प्रश्न गरिएको थियो । यस क्रममा अमेरिकादेखि केन्यासम्म, भारतदेखि जाापनसम्म महिलाका समान कथा सुनिए ।
अनलाइनमा हुने दुर्व्यवहारलाई रोक्नुपर्ने विश्वव्यापी अभियानले पछिल्लो समय बल पाइरहेको छ । अब सामाजिक सञ्जाल तथा सरकारले कदम उठाउने समय आइसकेको छ । न्यून आययुक्त मुलुक हुन् वा उच्च आययुक्त मुलुक रिपोर्टका अनुसार महिलाले नियमित यौनजन्य म्यासेज, पोर्नोग्राफिक फोटो, साइबर स्टकिङ अन्य दुर्व्यवहार तथा शोषण सामना गर्ने गर्छन् । समस्याको सबैभन्दा विकराल रूप फेसबुकमा देखिन्छ, जहाँ ३९ प्रतिशले दुर्व्यवहारको सामना गरे । त्यसपछि इन्स्टाग्राम (२३ प्रतिशत), ह्वाट्सएप(१४ प्रतिशत) र ट्विटर(९ प्रतिशत) आउँछ । अन्य अवस्थामा जस्तै यसको सबैभन्दा बढी भार विभिन्न तहको विभेद सामना गरिरहेकाहरूले सामना गर्नुपरेको छ । अर्थात् महिला सीमान्तकृत जाति वा धार्मिक समुदायका छन्, असक्त छन् वा एलजिबिटिआइक्यु पहिचान स्विकारेका छन् भने उनीहरू थप निसानामा पर्छन् । अनलाइनमा हुने दुर्व्यवहारको असर महिलाको अफलाइन जीवनमा समेत पर्छ । सर्वेक्षणमा सहभागी पाँचमध्ये एकजनाले अनलाइन दुर्व्यवहारका कारण आफूलाई भौतिक सुरक्षालाई लिएर चिन्ता लाग्ने बताएका छन् ।
दुर्व्यवहारका कारण आधुनिक जीवनमा महिलाको नेतृत्व तथा सहभागितामा अवरोध पुग्नेछ । युवतीको आत्मविश्वास, नेतृत्व सम्भावना र शारीरप्रतिको सोचमाथि प्रहार गर्ने हानिकारक लैंगिक मूल्य–मान्यता हाम्रो समाजको हरेक कुनामा पहिलेदेखि व्याप्त छन् । युवतीहरूमाथि सडकमा हुने दुर्व्यवहारले तिनलाई सार्वजनिक क्षेत्र असुरक्षित रहेको विश्वास दिलाएको थियो । समाजमा महिलाहरू नेता हुन सक्दैनन् भन्ने बलियो मान्यताले नीति निर्माण क्षेत्रमा पनि तिनको उपस्थितिमा असर गरेको छ । अनलाइनमा हुने हिंसाले यी पक्षलाई हिंसात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । ३९ प्रतिशत महिलाले अनलाइनमा हुने हिंसाले तिनको आत्मसम्मान घटाएको र ३८ प्रतिशतले उलेख्य मनसिक तथा भावनात्मक तनाव थप्ने बताएका छन् । १८ प्रतिशतले यसका कारण आफूले विद्यालयमा समस्या भोग्ने गरेको बताएका छन् । सुरुमा अनलाइन माध्यम ‘ग्रेट इक्विलाइजर’ भनेर चिनिन्थ्यो तर आज यही महिलाका लागि असहिष्णु बनेको छ ।
यसका लागि कदम चाल्नुपर्ने निकायमा सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । महिलाहरूले विद्यमान माध्यम प्रभावकारी रहेको र कुनै पनि प्रमुख माध्यमले हिंसा रोक्न पर्याप्त काम नगरेको बताएका छन् । ३५ प्रतिशतले आफूलाई दुर्व्यवहार गर्नेविरुद्ध रिपोर्ट गरेका भए पनि त्यस्तो व्यवहारमा कमी नभएको पाए । किनकि दुर्व्यवहार गर्नेले अन्य एकाउन्ट बनाएर पुनः सो कार्य दोहोर्‍याउने गरेको पाइएको छ । र, रिपोर्ट गर्नेको संख्या धेरै भए मात्र कुनै कडा कदम उठाएको पाइन्छ । परिणामस्वरूप युवती तथा महिलाले विश्वका प्रमुख सामाजिक सञ्जाल माध्यमलाई एक खुलापत्र लेख्दै अनलाइन दुर्व्यवहारविरुद्ध रिपोर्ट गर्ने थप बलियो र प्रभावकारी माध्यम सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालसँग यो समस्याको सामना गर्ने पर्याप्त साधन छन् । तर, यस विषयमा कदम उठाउनुपर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मात्र होइनन् । अनलाइन दुर्व्यवहारको सामना गर्नका लागि सरकारले विशिष्ट कानुन लागू गर्नुपर्छ । त्यस्तै पीडित सहायता सेवा तथा अनलाइन वातावरण सुरक्षित बनाउने कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अनलाइन हिंसाविरुद्ध विश्व नै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । इन्टरनेटको बढ्दो पहुँच र कोभिड–१९ को आगमनपछि अनलाइन सहभागिताको विस्तारले अनलाइन सुरक्षाको मुद्दा प्राथमिकतामा ल्याउनुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायातमा दशैंदेखि कार्डबाट भुक्तानी, ट्याक्सीमै गाउँ जाने सुविधा
सार्वजनिक यातायात प्रविधिमैत्री हुन थालेसँगै अनलाइनबाट टिकट काट्न सकिने सुविधा बढिरहँदा दशैंदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा कार्डबाट भुक्तानी गर्ने सेवा शुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ।
प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय सवारी साधनको टिकट अनलाइनबाट काट्न सकिने सेवा बढ्न थालेको छ। त्यसलाई अहिलेको कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीको जोखिमले अझै प्रविधिमैत्री हुन प्रेरित गरेको छ।
यसै क्रममा दशैंका लागि सबै पर्यटक सार्वजनिक सवारीको अनलाइन टिकट एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने तयारी भएको छ। १५ असोजमा टुरिष्ट बस एसोसिएसन अफ नेपाल (टिबान) र इलेक्ट्रोनिक्स कन्सर्न एण्ड रिसर्च सेन्टर (ईसीआरसी) बीच भएको सम्झौता अनुसार २१ असोजदेखि नै सम्पूर्ण पर्यटक बसको टिकट अनलाइनबाट काट्न सकिने सेवा सञ्चालनमा आउँदैछ।
यसअघि पनि केही पर्यटक बसले अनलाइनबाट टिकट उपलब्ध गराउने गरेका भए पनि अब भने टिबानमा आबद्ध सबै ३८ व्यवसायीका करीब २०० बस एकैपटक प्रविधिमा जाँदै छन्। टुरिष्ट बस प्रयोग गरेर यात्रा गर्ने यात्रुलाई टिकट लिन धाइधपेडी गर्नु नपर्ने गरी सुविधा दिन खोजिएको र कोरोना संक्रमण महामारीले उपयुक्त विकल्प समेत बनाएको टिबानका अनलाइन टिकट संयोजक शिशिर खनाल बनाउँछन्।
अनलाइनबाट टिकट काट्ने प्रविधिले एकातिर यात्रुलाई सजिलो हुन्छ भने अर्कातिर यसले सवारीसाधनको कारोबार पारदर्शी पनि हुन्छ। यही फाइदाका कारण काठमाडौं उपत्यकाभित्र गुड्ने सवारीसाधनले पनि दशैंदेखि नै अनलाइन मार्फत टिकट काट्ने सेवा शुरु गर्दैछन्। उपत्यकाभित्र विभिन्न रुटमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारीलाई दशैंदेखि नगदरहित बनाउन फिनटेक इन्टरनेशनलले तयारी गरिरहेको छ।
फिनटेकका प्रबन्ध निर्देशक हेमन्त अग्रवालले भने, “उपत्यकाभित्र दशैंदेखि सार्वजनिक यातायातमा नगदको कारोबार गर्नु नपर्ने गरी हामीले एटीएम कार्ड जस्तै यात्रा कार्ड बनाएका छौं।”
अग्रवालका अनुसार, अहिले यो प्रविधिको दुई सयदेखि तीन सय वटा सवारी साधनमा परीक्षण भइरहेको छ। दशैंको फूलपाती वा त्यसको दुई–तीन दिन अगाडिदेखि औपचारिक शुरूआत गर्ने तयारी छ।
कार्ड मार्फत भाडा भुक्तानी हुने प्रविधिले यात्रुलाई सहज र व्यवसायीलाई कारोबारमा पारदर्शिता हुने अग्रवाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले नेपाल राष्ट्र ब्यांकबाट वालेटको अनुमतिका लागि पनि आशयपत्र पाइसकेका छौं। अनुमति पाएपछि एपलाई नै विकास गर्दै त्यसैबाट कारोबार पनि गर्ने गरी काम भइरहेको छ।”
यात्रा कार्ड प्रयोगका लागि फिनटेकले १७ वटा बस व्यवसायीसँग सम्झौता गरिसकेको छ। शुरुमा सीमित बसमा यो प्रविधि प्रयोग भए पनि बिस्तारै सबै रुटका बस र ट्याक्सीदेखि माइक्रो बसमा समेत यात्रा कार्ड प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्य रहेको अग्रवाल बताउँछन्।
यात्रा कार्ड लिन रु.५० लाग्ने र यात्रुले इच्छाएको रकम रिचार्ज गरेर राख्न सक्ने व्यवस्था फिनटेकले गरेको छ। यो कार्ड प्रयोगका लागि काठमाडौंका विभिन्न बस स्ट्याण्डमा बुथ राखिनेछ, जहाँबाट कार्ड रिचार्ज गर्न सकिन्छ। सम्बन्धित सवारी साधनबाट पनि रिचार्ज गर्न मिल्ने गरी बनाइएको कार्डमा रु.५ सयसम्म राख्न सकिन्छ।
सवारी साधनमा जोडिएको प्रविधि तथा सम्बन्धित सवारीको सहचालकसँग भएको मेशिनमा कार्ड घोटेपछि तोकिएको भाडा नगदरहित प्रणालीबाट भुक्तानी हुने यात्रा कार्डले जानकारी दिएको छ। यस्तो प्रविधिबाट भुक्तानी गर्दा यात्रुले सवारी चढ्दा र ओर्लंदा कार्ड अनिवार्य घोट्नुपर्नेछ। यात्रा कार्ड प्रयोग गर्दा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा तिर्नु नपर्ने, भाडा तिर्न खुद्रा पैसा नहुने जस्ता समस्या नहुने फिनटेकका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवाल बताउँछन्। उनका अनुसार, बसमा यो प्रविधि जडानपछि दिनभर गरेको कारोबारको हिसाब बेलुका ब्यांक खातामा जाने व्यवस्था समेत हुने हुँदा पारदर्शी पनि हुन्छ।
सबै पर्यटक बस प्रविधिमैत्री
कोरोनाको संक्रमण जोखिम बढेसँगै टिकट बिक्रीको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन आउन थालेको छ। यात्रुले प्रविधि खोज्न थाल्दा व्यवसायीले पनि समय र परिस्थिति अनुसार विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था बनेको बस व्यवसायीहरू बताउँछन्।
महामारीसँगै बन्दाबन्दी/निषेधाज्ञाका कारण महीनौं थलिएका पर्यटक सवारीले सुरक्षा र सुविधालाई ध्यानमा राख्दै अनलाइन तथा एपमार्फत टिकट लिन सक्ने सेवा शुरु गर्दैछन्। महामारीका कारण विदेशी पर्यटकको आगमन अनिश्चित रहिरहँदा पर्यटक सवारीको प्रविधिमैत्री सेवाको प्राथमिकतामा यो वर्ष नेपाली यात्रु छन्।
कोभिड–१९ को महामारीले पर्यटन सेवा संकटग्रस्त भए पनि ग्राहकलाई दिने सेवामा कुनै सम्झौता नहुने टुरिष्ट बस एशोसिएसन (टिबान) मा आबद्ध बस व्यवसायी बताउँछन्। एशोसिएसनले दशैंका लागि अग्रीम बुकिङ अनलाइन प्रणाली मार्फत शुरू गर्दै छ। पर्यटकीय सार्वजनिक यातायातको सेवा काठमाडौंबाट पोखरा, नारायणघाट, लुम्बिनी र जनकपुरको लागि उपलब्ध हुनेछ। यस्तै, पोखराबाट चितवन र लुम्बिनीको लागि पनि सेवा उपलब्ध गराइएको टिबानका अनलाइन टिकट संयोजक तथा रेम्बो एड्भेन्चर टूर्स एण्ड ट्राभलका प्रबन्ध निर्देशक शिशिर खनालले बताए।
खनालका अनुसार, यात्रुले अनलाइन वा एपको प्रयोग गरेर टिकट लिन सक्ने प्रणालीको विकास भइरहेको छ। सरकारले सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु राखेर सेवा दिन आग्रह गरे अनुसार सुरक्षा मापदण्डभित्र रहेर सेवा–दिने र भाडामा सामान्य वृद्धि गरेको पर्यटक बस व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार, पर्यटक सार्वजनिक सवारीले काठमाडौंबाट पोखरा रु.१ हजार १००, चितवनका लागि रु. १ हजार र जनकपुरका लागि १ हजार २०० लिन थालेको जनाएका छन्। यसअघि पोखराको रु. ८००, चितवनको रु. ७०० र जनकपुर जाँदा रु. ८५० भाडा लिने गरेका थिए।
दशैंमा ट्याक्सी चढेरै गाउँमा
यसपालीको दशैंमा काठमाडौंबाट ट्याक्सीमा गाउँघर जाने अफर पनि ट्याक्सी व्यवसायीले ल्याएका छन्। इजी ट्याक्सी एपबाट बुकिङ गरेर गाउँगाउँसम्म जान सकिने अफर ल्याएको इजी ट्याक्सी नेपालका अध्यक्ष संजीत पौडेल बताउँछन्। सपरिवार सुरक्षित रूपमा घर जाने सुविधाका लागि यो योजना ल्याएको उनी बताउँछन्।
“यात्रुले एपबाटै ट्याक्सी बुकिङ गर्न सक्ने हुँदा धेरै पैसा लिएको गुनासो नहुने, परिवारसहित जाँदा सस्तो पर्ने र सुरक्षित हुने भएकाले यो स्तरीय सेवा हुनेछ”, पौडेल भन्छन्।
एपका साथै इजी ट्याक्सी नेपाल डटकमबाट पनि यात्रुले दशैंका लागि आफ्नो गन्तव्य जान ट्याक्सी बुकिङ गर्न सक्छन्। काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक गुड्ने नौ हजार ट्याक्सीमध्ये एपमा जोडिएका ६ हजारसँग कारोबार गर्न सकिने इजी ट्याक्सी नेपालले जनाएको छ।
ट्याक्सी सेवामा अहिले बजारमा इजी ट्याक्सीका साथै सारथि, इडी क्याब, कावा, ट्याक्सी माण्डु, ट्याक्सी मिटर, तासीसहितका एक दर्जनभन्दा बढी एप छन्।
कमिशनको चक्रबाट डिजिटलमा प्रवेश हुँदै
प्रविधिमा बस व्यवसायीलाई ल्याउन सजिलो भने नभएको डिजिटल कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूको अनुभव छ। सार्वजनिक सवारीमा व्यवसायी, चालक, सहचालक र काउन्टरका कर्मचारी कमिशनविना सेवा गर्न नमान्ने अवस्थाबाट पारदर्शी प्रणालीमा ल्याउने काम नै डिजिटलका लागि पहिलो चुनौती थियो। सहचालकले जथाभावी टिकटको पैसा बढी लिने गर्दा यात्रुलाई सवारीको भाडामा सधैं गुनासो हुन्थ्योे। चाडबाडमा झनै बढी भाडा असुल्ने प्रवृत्तिलाई सन् २०१६ देखि ईसेवाले वालेट मार्फत भुक्तानी प्रणाली अन्त्य गर्‍यो।
ईसेवाका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) सुवास सापकोटा भन्छन्, “आफैंले सिस्टम बनाएर दिनुपर्ने र सहचालकदेखि बस व्यवसायीसम्मलाई रिझाउनुपर्ने प्रवृत्ति बदलेर डिजिटलमा प्रवेश गर्न शुरुका दिनमा गाह्रो भएको थियो”, सापकोटा भन्छन्, “जहाजको टिकटलाई सन् २००९ देखि नै डिजिटल भुक्तानीमा लैजान सकिएको भए पनि बसको भने भर्खर आवश्यकता औंल्याउन सकिएको छ।”
देशभरका सबै सार्वजनिक सवारी अनलाइन र वालेटमा आएपछि मात्रै नगदरहित भुक्तानीको उद्देश्य सफल हुने भएकाले आफूहरुको प्रयास जारी रहेको सापकोटा बताउँछन्। प्रविधिको विकासलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बेला कोरोना संक्रमण महामारीले पनि त्यही विकल्पमा पुर्‍याएको उनको बुझाइ छ। “महामारीपछि सबै यात्रुवाहक सवारीसाधनले प्रविधिमैत्री भएर सेवा दिनुपर्छ, अनलाइन र एपबाटै टिकट लिन राज्यले नै जोड दिनु उचित हुन्छ”, सापकोटा भन्छन्।
एपबाट बसको टिकट लिने व्यवस्थाका लागि खल्ती डिजिटलले पनि प्रयास गरिरहेको छ। खल्तीले आफ्नो प्रणाली बनाइसकेको र दशैंदेखि नै एपबाट बसको टिकट लिने सेवा थप्ने घोषणा गरिसकेको छ। खल्तीका ग्राहकले दशैंका लागि एपबाटै टिकट लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइरहेको कम्पनीले जनाएको छ।